Waa maxay biosphere? Astaamo noocee ah ayuu leeyahay? Halkan ka ogow | Saadaasha Shabakadda
Dhulkeenna dhulkeennu waa nidaam si caddaalad ah u adag oo ay ku jiraan malaayiin is-dhexgal u dhexeeya noolaha iyo cunsurrada dabeecadda. Waa mid aad u adag oo dhammaystiran suurtagal maaha in la barto meeraha Dunida guud ahaan. Si loo kala saaro nidaamyada kala duwan ee ka kooban Dhulka, afar nidaam ayaa la qeexay. Biosphere, geosphere, hydrosphere iyo jawiga.
Juqraafigu wuxuu ururiyaa qaybta Dhulka in waa adag yahay kaas oo laga helo lakabyada Dhulka aan ku nool nahay oo dhagaxyadu ka soo baxaan. Geosphere wuxuu ka kooban yahay dhowr lakab.
Lakabka guud ee dhulka, oo inta badan ku kala duwan 500 ilaa 1.000 mitir, oo ka kooban carrada iyo dhagxaanta dhiiga.
Lakabka dhexe ee u dhigma qolofta qaaradaha halkaasoo laga helo bannaanka, dooxooyinka iyo nidaamyada buuraha.
Lakabka hoose ee basalt-ka ee laga helo qolofta badda ayaa leh dhumucdiisuna waa 10-20km.
Dhulka xudunta u ah.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan lakabyada Dhulka dhagsii xiriirka aan hadda kaaga tagnay.
Jawigu waa qaybta gaaska ee ku xeeran Dhulka. Waxay ka kooban tahay gaasas isku dhafan oo ah nitrogen (78%), oxygen (21%), iyo gaasas kale (1%). Waa aagga ay daruuraha iyo roobabku ka samaysmaan, muhiimaddiisuna waa taas waxay suurtogal ka dhigeysaa in dhulkeenu noqdo mid lagu noolaan karo.
Hydrosphere waa qeyb ka mid ah Dhulka ay biyaha ku jiraan dareere ah. Qaybta dareeraha ahi waa badweynta, badaha, harooyinka, wabiyada, dhaadhaca dhulka hoostiisa, iwm. Qaybta adagi waa koofiyadaha cirifyada, glaciers iyo barafka barafka.
Sidaad arki karto, nidaam hoosaad kastaa oo dhulka ka mid ahi wuxuu ka kooban yahay xubno kala duwan oo leh shaqo muhiim ah nolosha adduunka. Laakiin midda aan diiradda ku saari doonno maqaalkan ayaa ah halka loo yaqaan 'biosphere'. Waa maxay biosphere?
Biosphere waa dhamaan gaaska, adag iyo dareeraha dhulka dushiisa oo ay ku noolyihiin noolaha. Waxay ka kooban yihiin labadaba aagagga lithosphere iyo aagagga hydrosphere iyo jawiga ay noloshu suurtogalka ka tahay.
1 Astaamaha Biosphere
2 Heerarka abaabulka ee Biosphere
2.2 Bulshada noolaha
Hadda oo aad ogtahay waxa biosphere-ku yahay, aan aragno astaamihiisa. Biosphere wuxuu ka kooban yahay lakab khafiif ah oo cabbirro aan caadi ahayn. Maadaama ay tahay nidaam ururiya aagagga meeraha ay noloshu ka jirto way ka dhib badan tahay xadaynta halka biosphere ka bilaabmo iyo dhamaadka. Laakiin ka badan ama ka yar, biosphere-ka wuxuu ku fidaa ilaa 10 km oo ka sarreysa heerka badda iyo qiyaastii 10 mitir oo ka hooseeya heerka dhulka halkaas oo xididdada geedaha iyo dhirta ay dhex galaan ayna ku yar yihiin.
Qaybta badda, waxaa kale oo ku jira aagagga biyaha dusha sare iyo moolka badda dhexdeeda oo noloshu ka jirto. Bannaanka sare iyo xadka aan in ka badan ama ka yar na soo rogay, ma jiraan nolol dhul ah.
Sidaan ka faallanay, nolosha biosphere uma muuqato lakab joogto ah oo xayawaan ah, dhir iyo noole (bakteeriya iyo fayras), laakiin shaqsiyaadku waxay ka tirsan yihiin noocyo kala duwan. Noocyadan (ilaa maanta waxaa jira in ka badan laba milyan oo nooc oo la yaqaan ah) ayaa loo qaybiyaa oo ay ku fadhiyaan dhulka si ka duwan. Qaar waxay tahriibaan, qaarna waa guuleystaan ​​kuwa kalena waa dhul badan oo difaacaan deegaankooda.
Biosphere waa tusaale ka mid ah nidaamka. Waxaan u qeexnaa nidaamka in ay yihiin qaybaha is dhexgala, iyo sidoo kale wakiilada dibedda, si ay ugu dhaqmaan sidii mid sii wadaya shaqeyn ka dhexeysa. Taasi waa sababta biosphere si fiican loogu qeexaa inay tahay nidaam maadaama ay leeyihiin noocyo noocyo ah oo is dhexgala, isla markaana, la falgala waxyaabo kale oo aan ka mid ahayn biosphere, laakiin ka tirsan geosphere, jawi iyo hydrosphere. .
Si loo tusaale qaato waxaan u jeesanaynaa canaasirta, dhulka, biyaha iyo hawada. Kalluunku wuxuu ku noolyahay hydrosphere, laakiin markiisa, biosphere, maadaama uu xiriir la leeyahay biyo dareere ah wuxuuna deggen yahay aag ay nolosha ka jirto Waxaa la mid ah shimbiraha. Waxay ku dul duulaan lakabka gaaska leh ee Dhulka ee loo yaqaan jawiga, laakiin sidoo kale waxay deggaan aagag leh nolol ay leedahay biosphere.
Sidaa darteed, biosphere-ka waxaa ku jira arrimaha noolaha taas oo ay matalaan dhammaan bulshooyinka noolaha ah ee is dhexgala iyo inta kale ee nidaamka dhulka. Bulshooyinkan noolaha waxay ka kooban yihiin soosaarayaal, macaamiil, iyo wax dumiyayaal. Laakiin sidoo kale waxaa jira arrimo abiotic la falgala noolaha. Arrimahaa waa oksijiin, biyo, heerkul, iftiinka qoraxda, iwm. Qaybta sababahan, biotic iyo abiotic, waxay ka kooban yihiin deegaanka.
Heerarka abaabulka ee Biosphere
Biosphere-ka, guud ahaan, nooluhu kuma noola gooni gooni, laakiin waxay u baahan yihiin inay la falgalaan noolaha kale iyo arrimo qoto dheer. Taasi waa sababta, dabeecadda ay jiraan heerarka kala duwan ee abaabulka. Waxay kuxirantahay isdhexgalka noolaha iyo sida ay ukala weynyihiin kooxaha, waxaa jira dad, bulshooyin iyo nidaamyo deegaan.
Heerkan abaabulku wuxuu ku dhacaa dabeecadda markii noolaha noocyo gaar ah oo dhir ah, xayawaanno ah ama sheybaar isku-xirmaan waqti iyo goobo guud. Taasi waa, noocyada kala duwan ee dhirta iyo xayawaanka isla meel kuwada noolaan karaan waxayna u isticmaalaan isla khayraadka si ay u noolaadaan una sii bataan.
Markaad tixraaceysid dad, meesha laga helo noocyada iyo waqtiga dadkaas waa in la go’aamiyaa, maadaama uusan waqtiga ku sii soconayn sababo ay ka mid yihiin cunno la’aan, tartan ama isbeddelada deegaanka. Maanta, ficilka aadamaha, dad badani kuma noolaadaan maxaa yeelay nafaqooyinka ku jira deegaanka ay ku nool yihiin wasakheysan ama xaalufin.
Bulsho bayooloji waa mid ay laba ama in ka badan oo dad nool ahi ku wada nool yihiin. Taasi waa, dadweynaha kasta la falgalaan dadyowga kale iyo deegaanka ku hareeraysan. Bulshooyinkaan bayoolojiga ah waxaa ka mid ah dhammaan dadka ku nool noolaha noocyadiisa kala duwan ee is dhexgala. Tusaale ahaan keymo, balli, iwm. Waxay tusaale u yihiin bulshooyin bayooloji ah, maadaama ay jiraan tiro kalluun ah, amphibians, xamaarato, algae iyo nafaqeeyayaal yar yar oo is dhexgala, isla markaana, la falgala arrimo qoto dheer sida biyo (neefsashada), xaddiga iftiin garaacaya balliga iyo jiinka.
Nidaamka deegaanka waa heerka ugu weyn uguna adag ee abaabul. Dhexdeeda, bulshada bayoolojiga ahi waxay la falgalaan deegaanka abiotic si ay u sameeyaan nidaam isu dheellitiran. Waxaan u qeexnaa nidaamka deegaanka qaybaha cunsuriyada iyo abiotic ee aag cayiman oo is dhexgala. Dadyowga kala duwan iyo bulshooyinka ku nool nidaamyada deegaanka waxay isku tiirsan yihiin midba midka kale iyo sababaha abiotic. Tusaale ahaan, amphibians waxay u baahan yihiin cayayaan si ay u quudiyaan, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin biyo iyo iftiin si ay u noolaadaan.
Isdhexgalka ka dhexeeya bey'ada iyo abiotic deegaanka wuxuu dhacaa marar badan oo dabiici ah. Marka dhirtu sawir qaadeyso, waxay isku weydaarsadaan gaasaska jawiga. Xayawaanku markuu neefsado, markuu quudinayo ka dibna qashinkiisa baabi’inayo, iwm. Isdhexgalka noocan ah ee bey'ada iyo abiotic deegaanka ayaa u tarjumaya isweydaarsiga tamarta joogtada ah ee noolaha iyo deegaankooda.
Kakanaanta kakanaanta isdhaxgalka, ku tiirsanaanta noocyada iyo shaqooyinka ay gutaan, kordhinta nidaamka deegaanka waa aad u adag in la dhiso. Nidaamka bey'adeedu ma aha hal qayb oo lama qaybin karo laakiin wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo yaryar oo leh is-dhexgalyo u gaar ah iyo shaqadooda.
Nidaamka bey'ada waxaa jira laba fikradood oo leh xiriir aad u dhow maadaama nooluhu ku tiirsan yahay iyaga. Marka hore waa Deegaanka. Degaan waa meesha nooluhu ku nool yahay kana soo baxo. Hoygu wuxuu ka kooban yahay aagga jirka ee abiotic ee nooluhu ku nool yahay iyo walxaha noolaha ee ay is-dhexgalaan. Deegaanku wuu weynaan karaa sida harada ama u yaryahay sida qudhaanjada.
Fikradda kale ee la xiriirta nidaamka deegaanka ayaa ah niche deegaanka. Tani waxay sharraxaysaa shaqada uu nooluhu ku leeyahay nidaamka deegaanka. Si kale haddii loo dhigo, habka uu nooluhu ula xiriiro isirrada noolaha iyo abiotic. Waxay noqon karaan noolaha heterotrophic, qashin qubka, wax dumiya, iwm. Waxaa la dhihi karaa nookha deegaanka waa xirfada ama shaqada uu noolaha ku dhex leeyahay nidaamka deegaanka ee uu ku dhex nool yahay.
Sidaad arki karto, biosphere waa nidaam aad u kakan oo ay jiraan cilaaqaadyo badan oo ah kuwa hagaajiya arrimaha nolosha meeraha. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nidaamka deegaanka wasakhda iyo xaalufinta hawlaheena inay awoodaan inay ilaaliyaan dhamaan cilaaqaadka noolaha. Noole kasta oo deegaanka ka mid ah wuxuu gutaa shaqadiisa isla markaana shaqooyinkaas kala duwan ayaa ah waxa noo suura gelinaya inaan ku noolaano xaalado caafimaad qaba. Taasi waa sababta ay muhiimad weyn u leedahay in la ilaaliyo lana ilaaliyo nidaamyada deegaanka si aan ugu sii wadno inaan wanaag kula noolaano tayada nolosha
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Waa maxay biosphere?
Macluumaad aad u fiican.
Ku jawaab BRENDA TREBEJO RODRIGUEZ
Ku jawaab lizeth rojas
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, wax badan ayay i caawisay.
Dhalashada Arctic-ka ayaa saameyn ku leh cuntada bears-ka